भोलिदेखि शुरु हुँदै मलमास: एक महिना यस्ता कार्य गर्न हुँदैन ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भोलिदेखि शुरु हुँदै मलमास: एक महिना यस्ता कार्य गर्न हुँदैन !
भोलिदेखि शुरु हुँदै मलमास: एक महिना यस्ता कार्य गर्न हुँदैन !
महिनामा दुई वटा सङ्क्रान्ति पर्यो भने क्षयमास भनिन्छ । ज्योतिषका विद्वान् भास्कराचार्यले आफ्नो ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणिमा मलमास र क्षयमासको स्पष्ट परिभाषा दिएका छन्
अर्थात् सङ्क्रान्ति नभएको महिना अधिकमास वा मलमास हो । दुईवटा सङ्क्रान्ति भएको महिना क्षयमास हो । क्षयमास भने कहिले कहिलेमात्र हुने गरेको छ । यसअघि क्षयमास २०२० सालमा परेको वास्तुशास्त्री शिवप्रसाद पोखरेलले बताए। क्षयमास कात्तिक, मङ्सिर र पुसमा पर्ने गरेको छ । यसमा पनि बढीजसो मङ्सिर र पुसमा क्षयमास पर्छ । कात्तिक महिनामा भने क्षय र अधिकमास दुवै पर्न सक्छ । माघ महिनामा भने क्षय र अधिकमास दुवै पर्दैन । बाँकी आठ महिनामा अधिकमास पर्न सक्छ ।
महिनावारीअघि नै थाहा पाउन सकिन्छ गर्भ रहेको, यस्ता लक्षण देखिए रहनुहोस् अलर्ट